Uphononongo lweCinga lokuCinga kunye neNtshabalalo-iZiko leSiseko
Uphononongo lweConing and Destiny
Iingcamango zeCandelo lokuCinga nokuBhubha
Ndicinga ngoku UkuCinga nokuPhelela ukuba yincwadi ebalulekileyo kunye nentsingiselo eyake ipapashwa nangaluphi na ulwimi.
Umyalezo wam kuphela ngumntu owaziwayo esithi "Siyabonga." Le ncwadi ithintele indlela yam, yavula intliziyo yam kwaye yangonwaba kwinqophiso yam! Ndiyavuma ukuba ubunzima bezinye izinto ziyimingeni kwaye andisayi kuqonda ngokucacileyo ezinye, ukuba akuninzi, eziphathekayo. Kodwa, le nxalenye yeso sizathu sovuyo! Ngomfundi ngamnye ndifumana ukuqonda okungakumbi. UHarold ungumhlobo entliziyweni yam, nangona ndandingenelungelo lokuba ndidibane naye. Ndiyabulela isiseko sokwenza izinto eziphathekayo mahhala kulabo bawafunayo. Ndiyabulela ngonaphakade!
Ukuba ndandiqhayisa kwisiqithi kwaye ndavunyelwa ukuthatha incwadi enye, le nto yayiza kuba yincwadi.
UkuCinga nokuPhelela Ngenye yeencwadi ezingapheliyo eziza kuba zizinto eziyinyani kwaye zixabisekileyo kubantu abantu abayizinkulungwane ezilishumi ukususela namhlanje njengokuba kunjalo nanamhlanje. Ubutyebi bayo bobungqondi kunye nobomoya bungahlali.
YePercival UkuCinga nokuPhelela kufuneka iphephe naluphina ulwazi olufunyenweyo olubhaliweyo ngobomi. Umbhali ubonisa ukuba uyazi oko uthethayo. Akukho nkolo yezenkolo ezingenanto kwaye akukho ncamango. Eyona nto iyingqayizivele kulolu hlobo, uPercival ubhale oko akuyazi, kwaye uyazi kakhulu - ngokuqinisekileyo ngaphezu kwanoma yimuphi umlobi owaziwayo. Ukuba uzibuza ukuba ungubani, kutheni ulapha, uhlobo lwendalo yonke okanye intsingiselo yobomi ngoko i-Percival ayiyi kukuyeka. Inomdla ngokukhethekileyo iinkcazo zakhe ezicacileyo ezicacisa izihloko eziyimfihlakalo njengezono zangaphambili, ukukhulelwa okungabonakaliyo, ukuwa komntu kunye nesizathu sesini. Iimpendulo zakhe kule mibuzo zibucayi, zimelele kwaye ziyamangalisa. Indlela ehamba phambili kumntu ngamnye ocingayo ibonakala ngokucacileyo kwaye ukucaciswa kwakhe kweNdlela Enkulu kuhamba njengeyona nto ibhalwa phambili. Unomdla ngeenkcukacha kunye nokucaciswa ngokucacileyo, njengawo wonke umsebenzi omhle U-Percival unciphisa itome yakhe kwimigaqo apho umntu onyanisekileyo angayiqonda kwaye akwenze. Enye into ngokuqinisekileyo: emva kokufunda UkuCinga kunye neNkqenkqaso uza kubeka inzame iingcamango eziza kukunika ikamva lakho lenene. Lungela!
Njengoko uShakespeare inxalenye yazo yonke iminyaka, kunjalo njalo UkuCinga nokuPhelela yencwadi ethi Humanity.
Ngokuqinisekileyo UkuCinga nokuPhelela sisityhilelo esiyingqayizivele kwixesha lethu.
Ubanzi nobubanzi UkuCinga nokuPhelela lubanzi, kodwa ulwimi lwayo lucacile, luchanekile yaye ludlamkile. Incwadi iyintsusa ngokupheleleyo, okuthetha ukuba ivela ngokucacileyo kuPercival, kwaye ke yeyelaphu elipheleleyo, elingqinelanayo. Akacingi, akacingi okanye uqikelele. Akenzi ntetho zobuzali. Kubonakala ngathi akukho lizwi ngaphandle kwendawo, akukho gama lisetyenziswe gwenxa okanye ngaphandle kokubaluleka. Omnye uya kufumana ukufana kunye nokwandiswa kweminye imigaqo kunye neengcinga eziqulethwe kwiimfundiso zoBulumko zaseNtshona. Omnye ufumanisa okuninzi okutsha, nokuba inoveli kwaye iya kuba ngumngeni kuyo. Nangona kunjalo, kuya kuba bubulumko ukungangxami ekugwebeni kodwa ukuzibamba ngenxa yokuba uPercival akachaphazeleki ngokuzikhusela kumfundi xa engaqhelananga nezihloko njengoko enokwenza ukuba ingcaciso-ntetho yakhe inyanzelise ixesha kunye nokulandelelana kokubhengezwa kwakhe. Isibongozo sika-Heindel "kwiLizwi kuLumko" sinokulingana ngokulinganayo xa ufunda uPercival: "kuyabongozwa ukuba umfundi azibambe zonke izinto zokudumisa okanye ukusola ade afunde lo msebenzi umonelisile ngokufanelekileyo."
Le ncwadi ayiyiyo yonyaka, okanye inkulungwane, kodwa yexesha. Ichaza isiseko sokuziphatha kwaye isombulula iingxaki zeengqondo eziye zaphazamisa indoda iminyaka.
Le yenye yezona ncwadi zibalulekileyo kwezakha zabhalwa kwimbali eyaziwayo nengaziwayo yale planethi. Izimvo nolwazi zichaze isibheno sokuqiqa, kwaye zinayo "isangqa" senyaniso. U-HW Percival ungumntu ongaxhamli eluntwini, njengoko iziphiwo zakhe zoncwadi ziya kutyhila, xa ziphandwe ngokungakhethi cala. Ndiyamangaliswa kukungabikho kobugcisa bakhe kuludwe "olunconywayo lokufunda" oluninzi ekupheleni kweencwadi ezininzi ezibalulekileyo nezibalulekileyo endizifundileyo. Ngokuqinisekileyo ungoyena mfihlelo ugcinwe kakuhle kwihlabathi lamadoda acingayo. Uncumo olumnandi kunye neemvakalelo zombulelo zikhutshwa ngaphakathi, nanini na xa ndicinga ngalowo usikelelweyo, owaziwayo kwihlabathi lamadoda njengoHarold Waldwin Percival.
UkuCinga nokuPhelela unikeza ulwazi endikude ndifuna. Yinto enqabileyo, enobuncwane kwaye ekhuthazayo ebantwini.
Andizange ndiyiqonde ngokwenene, de ndifumene UkuCinga nokuPhelela, indlela esiyijonga ngayo iinjongo zethu ngokucinga kwethu.
UkuCinga nokuPhelela Ulungile Imali ayikwazanga ukuyithenga. Ndikhange ndiyifunayo yonke yobomi bam.
Emva kweminyaka eyi-30 yokuthatha amanqaku amanqaku avela kwiincwadi ezininzi zengqondo, ifilosofi, inzululwazi, i-metaphysics, i-theosophy kunye nezifundo ezinxulumene nezihlobo, le ncwadi ebalulekileyo impendulo epheleleyo kuyo yonke into endiyifunayo iminyaka emininzi. Njengoko ndiyifumene nokuqulathwe kukho kukhokelela inkululeko enkulu engqondweni, emoyeni nangokwenyama ngokuphefumulelwe ngamandla ukuba amazwi akakwazi ukuveza. Ndiyicinga ukuba le ncwadi yinkxalabo kwaye iveza ukuba ndiye ndavuya ukufunda.
Nanini naxa ndivakalelwa kukuba ndidibanise ndivula le ncwadi ngandlela-thile kwaye ndifumanise into endiyifunayo leyo ininika ukuphakamisa kunye namandla endiyidingayo ngelo xesha. Inyaniso siyidala i-destin yethu ngokucinga. Ubomi obungafani ngayo ukuba sasifundiswa ukuba ukususela ekuzalweni.
Xa ufunda UkuCinga nokuPhelela Ndiyamangaliswa, ndamangaliswa, ndinomdla omkhulu. Yeyiphi incwadi! Ziziphi iingcinga ezintsha (kum) ziqulethe!
Kwakungekade ndiqalise isifundo UkuCinga nokuPhelela ukuba ndiyifumene inkqubela phambili ebonakalayo ebomini bam.
UkuCinga nokuPhelela ngu-HW Percival yenye yezona ncwadi zibalulekileyo kwezakha zabhalwa. Ijongene nombuzo obudala, Quo Vadis? Sivela phi? Kutheni silapha? Apho siya khona? Ucacisa ukuba ezethu iingcinga ziba njani ikamva lethu, njengezenzo, izinto, kunye neziganeko, kubomi bethu ngabanye. Ukuba umntu ngamnye kuthi uxanduva lwezi ngcinga, kunye nefuthe lazo kuthi nakwabanye. UPercival usibonisa ukuba into ebonakala ngathi "sisiphithiphithi" kubomi bethu bemihla ngemihla inenjongo kunye noMyalelo onokubonwa ukuba siza kuqala ukugxila kwiingcinga zethu, kwaye siqale ukuCinga okuNene, njengoko kuchaziwe kubugcisa bakhe. U-Percival ngokwakhe uyavuma ukuba akangumshumayeli okanye utitshala, kodwa usinika i-cosmology esekwe kubukrelekrele. Umhlaba woLungelelwaniso kunye nenjongo. Akukho ncwadi yemetaphysical eyakhe yanikezela ngolwazi olucacileyo, olufutshane, olufumanekayo kule ncwadi. Iphefumlelwe ngokwenyani kwaye iyakhuthaza!
Ayikaze ngaphambili, kwaye ndiye ndifuna ukunyanzela inyaniso yonke yobomi bam, ndifumene ubulumko nokukhanyisa okuninzi njengoko ndiqhubeka ndifumanisa UkuCinga nokuPhelela.
UkuCinga nokuPhelela kumangalisa kum. Undenzele ihlabathi elilungileyo kwaye ngokuqinisekileyo yimpendulo kule minyaka esihlala kuyo.
Ngokomntu, ndicinga ukuba uNgqiqo-Ubunzulu bokuqonda-kunye nolwazi olunzulu nolucacileyo olukulo UkuCinga nokuPhelela yi-HW Percival ingaphezu kwexabiso. Iphakamisa ngokubanzi abalobi abakhulu kwiinkonzo zehlabathi, xa kuthelekiswa noPercival, kubonakala kungaqondakali, kungaqiniseki nokudideka. Uqikelelo lwam lusekelwe kuphando lwe-50 iminyaka. Kuphela uPlato (uyise wefilosofi yaseNtshona) kunye noZen Buddhism (okuchaseneyo) aya kufika naphi na kuPercival, odibanisa zombini ngendlela ecacileyo nepheleleyo!
I-Percival iye 'yahlaba isigqubuthelo,' kwaye incwadi yakhe yavula imfihlelo yendalo yonke. Ndandilungele ijacket okanye i-boneyard xa ndinikezelwa le ncwadi.
Ndide ndifumene le ncwadi andizange ndibonwe ukuba yilo mhlaba we-topsy-turvy, ngoko wandilungisa ngokukhawuleza okukhulu.
UkuCinga nokuPhelela luphawu olulungileyo kwiintlobo ezahlukeneyo zezifundo ze-metaphysical kwaye yinto ye-encyclopedia malunga naloo nto. Ndiqinisekile ukuba ndiya kuqhubeka ndibhekisela kuzo kwiintetho zam nomsebenzi wam.
Ndiye ndafunda ezininzi iinqununu iminyaka kwaye le ndoda yayinayo kwaye yazi indlela yokudibanisa konke kunye nokubeka isityebi ukuluka ubomi nokuba ngubani thina okanye asikho.
Nangona ndifunda ngokubanzi kwi-Theosophy kwaye ngeendlela ezininzi zokucinga, ndivakalelwa kukuba UkuCinga nokuPhelela yincwadi ebalulekileyo kunazo zonke, ebanzi, kunye neyona nto ingavamile yokuqonda. Ngomqulu owodwa omnye ndiza kuhlala kunye nam, ukuba ndibe nesizathu esithile sichithwa kuzo zonke ezinye iincwadi.
Ndiyifunde UkuCinga nokuPhelela amaxesha amabini ngoku kwaye asinakholwa ukuba incwadi enjalo inkulu ikhona.
Ngexesha leminyaka emininzi edlulileyo, ndagqogqa kakhulu indawo efunda izikolo ezahlukeneyo ezinxulumene nendalo yomntu ngomqondo omncinci kunye nobubanzi obubanzi. Ekubeni, zimbalwa zezikolo kunye nemisebenzi endiyifundayo yayinanto enokubaluleka ngokunikela ngokuphathelele ngokwenene umntu kunye nesiphelo sakhe. Kwaye emva komnye umhla ocolileyo ndangena UkuCinga nokuPhelela.
Njengengqondo ye-psycho-physiotherapist ngophando, ndisebenzise imisebenzi kaMnu Percival ukuqhubela phambili ukuphilisa nokuqonda abantu abaninzi abadidekileyo-kwaye isebenza!
Umyeni wam nobabili sifunda iincwadi zeencwadi zakhe imihla ngemihla, kwaye sifumene ukuba nantoni na eyenzekayo, ingaba ngaphakathi okanye ngaphandle, ingachazwa ngemigaqo yakhe ye nyaniso. Ubeke umyalelo kwizinto ezibonakala zingenangqiqo endizigcina ndihamba nazo zonke iintsuku. Iziseko ezisisigxina ziye zahlala zizolile ngaphandle koyika. Ndiyakholwa UkuCinga nokuPhelela mhlawumbi yincwadi ebalulekileyo kunazo zonke ebhaliweyo.
Incwadi ebalaseleyo endakha ndayifunda; nzulu kakhulu kwaye ichaza yonke into ngobukho bomntu. UBuddha wathi kudala loo ngcinga ngumama wezenzo zonke. Akukho nto ingcono kunale ncwadi yokuchaza ngokweenkcukacha. Enkosi.
Sonke sivile ezi zimbini zicaphula amaninzi amaninzi, "Ngakho konke ukufumana kwakho, fumana ukuqonda," kwaye "Uyazi ngokwakho." Andiyazi ukuba akukho mnye uqala ukufumana ukufikelela kwesi siphelo kunokuba kusebenza nguHarold W. Percival